'The Matrix: Fitsanganana amin'ny maty' Hahatonga anao hiteny hoe "Whoa" - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Ilay Matrix: Fitsanganana amin'ny maty' Hahatonga anao hiteny hoe “Whoa”
Fahano ny lohanao
by Trey Hilburn III Septambra 9, 2021
by Trey Hilburn III Septambra 9, 2021 7,703 hevitra
Ny Matrix: Fitsanganana amin'ny maty tranofiara dia tonga eto ihany. Notsofina tanteraka ny saintsika. Avy amin'ny Matrix nohavaozina ka hatrany amin'ny toe-javatra vaovao nanjo an'i Andriamatoa Anderson sy ny fonja ary ny asa vaventy vaovao ary kung-fu. Tena tia an'izay hitanay daholo izahay.
Tsy nila nivarotra firy izahay rehefa niverina tao amin'ny The Matrix, saingy nihoatra ny nantenainay izany. Hiverina amin'ny tontolon'ny saina isika amin'ny fomba vaovao ary tsy andrintsika ny ho variana aminy.
Ny sarimihetsika dia i Keanu Reeves, Carrie Anne Moss, Jessica Henwick, Christina Ricci, Ellen Hollman, Priyanka Chorpa Jones, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Lambert Wilson, Jada Pinkett Smith ary maro hafa.
Ny Matrix: Fitsanganana amin'ny maty manana anao ve rehefa tonga any amin'ny sinema sy HBO MAX manomboka ny 22 desambra.